Afrika: Mizara ireo fahatsiarovan-dry zareo ny fahazazany amin’ny aterineto ireo Afrikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Septambra 2010 16:55 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, Swahili, Français, বাংলা, 日本語, македонски, 繁體中文, 简体中文, English
Bilaogy iray ahitana andian-dahatsoratra nosoratan'ireo Afrikana manerana an'izao tontolo izao mikasika ny fahazazany ny That African Girl . Bilaogy iray mikasika ny fitomboana tao anatina fianakaviana Afrikana sy ny fianarana miaina ao anatina tontolo roa izy io .Efa nipetraka tany Afrika sy tany Andrefana ireo mpitoraka bilaogy izay mizara ireo fahatsiarovany ao .
I Makafui Fiavi sy Adey Teshome no nisantatra ny bilaogy. Teraka tany Togo ary lehibe tany Etazonia i Makafui ary tanora Etiopiana-Amerikana i Adey.
Ity ny teny fampidirana nataon'i Makafui:
Nandritra ireo taom-pianarana tany amin'ny kolejy, betsaka ireo olona no maka fotoana hahafantarany bebe kokoa ny tenany sy ny toerany eo amin'izao tontolo izao. Manao toy izany ny ankamaroan'ny olona amin'ny alalan'ny fanandraman'izy ireo toetra maro, na amin'ny fizahana ireo vondron'olona mifamatotra ara-tsosialy sy ireo foto-kevitra maro samihafa. Amiko, ireo taona 4 ireo dia nitondra ahy hizaha kokoa izay mombamomba ahy miafina maro samihafa sy faniriana mafy hianatra ny fomba ahafahana miaina ao anatina tontolo roa. Teraka sy lehibe tany Togo aho ary nahatonga ahy hanam-panirina hizaha sy hahalala ireo kolotsaina maro, hihaino ireo tantara sy hianatra mikasika ny antony mahatonga ny olona hivondrona ny nitomboako tany Etazonia. Faratampon'ireo hevitra, ireo fifanakalozan-kevitra sy ny faniriana hanohy hianatra sy hifampizara ny That African Girl (TAG). Eto aho no mizara mikasika ireo zavatra, olona, toerana, tantara, nofinofy ary ireo zavatra mahafinaritra ahy ka mahalasa ny aingam-panahiko .
“Mihevitra ny bilaogy ho toy ny toerana ho an'ny kolotsaina mifangaro, ahitana tombotsoa maro, ankizy maro sahala amintsika manome aina vao ireo eritreritsika” i Adey Teshome:
Fony aho nanaiky voalohany ny handray anjara amin'ity bilaogy ity, tena nanome aingam-panahy ho ahy mihitsy ny hevitr'i Mak–toerana ho an'ny kolotsaina mifangaro, ahitana tombontsoa maro, ankizy maro sahala amintsika izay manome aina vao ireo eritreritsika. Ary araka ny fitiavako miteny azy, io no antony mahatonga antsika ho mpinamana. Manana ny fomba fiteniny amin'ny maso izay izy ary fomba fijery mahafinaritra hifampizaràny. Ary tiako ny fieritreretana fa hoe isan'izany aho. Izany no nahatonga ahy hiezaka ho amin'ity bilaogy ity – tanora Etiopiana-Amerikana aho, vao haingana ( eny, teo amin'ny asa) no nahazo diplaoma tany amin'ny fianarana ambaratonga ambony, miezaka ny maneho ny toerako ary miezaka ny hahazo fàka eo amin'ny fiainako, ka afaka hametraka farantsa roa ao aminy isan'andro sy rahatrizay
Mpandray anjara avy any Oganda/Kenya mipetraka any Etazonia i Liz A. Ireto ireo fahatsiarovany ny fahazazany :
1) Voakapoka aho rehefa voasazy . Liana foana aho rehefa miresaka amin'ireo namako Fotsy hoditra na Aziatika mikasika ny karazana sazy toy ny hoe asaina mipetraka eny an-joron-drindrina izy ireo , na asaina mankany an'efitranony ry zareo. Manana tsora-kazo mahia izay mianjera avy amin'ireo hazo ao an-tananay foana ny reniko ary manana ireo vaventy indray ny dadako, indraindray izahay ihany no asaina maka azy ireo, ary dia mahazo kapoka vitsivitsy eo amin'ny kibon-dranjo.
Any Amerika, toa hoe mety hiafara any amin'ny fiantsoana ireo sampan-draharaha misahana ny sosialy ny zavatra toy izany hijeren'izy ireo ny zava-misy na mahatsapa karazana alahelo amin'ireo ray aman-dreniny noho izany eto ireo ankizy. Nefa izaho manana.